Location: Mbido » Ịdee » award Mmeri » Dike njem nlegharị anya ọhụrụ na -eme Senegal Nganga
Ndi World Tourism Network, netwọkụ nke ndị njem na -eme njem na mba 128 bidoro onyinye nturu ugo ndị njem. WTN bidoro iwughari njem ahụ na Machị 2020 na Berlin, Germany.
Maazị Deme Mouhamed Faouzou bụ onye ndụmọdụ nke ministri njem nlegharị anya na njem ụgbọ elu na Senegal, ugbu a ọ kachasị ọhụrụ Dike njem site na World Tourism Network.
A na -emeghe Hall of Heroes International Tourism Heroes site na nhọpụta naanị ịmata ndị gosipụtara idu ndú pụrụ iche, ihe ọhụrụ, na omume. Ndị dike njem nlegharị anya na -aga n'ihu. Enweghị ụgwọ ọ bụla.
O kwuru, sị: Aghọtara m mkpa na ibu nke ihe ùgwù a sitere na nnukwu ndị njem nlegharị anya ụwa, ọ ga-amasị m ịkwado nkwado m site na ịgbatị mbọ na ọnụ ọgụgụ na ịdị mma maka ịtụteghachi njem nlegharị anya nke Africa mgbe COVID-19 gasịrị.
Maazị Deme Mouhamed Faouzou Josef Kafunda họpụtara ya na Namibia n'etiti ndị ọzọ ka ọ bụrụ dike njem nlegharị anya nke ndị Network Njem Nleta Ụwa.
Na ntinye nke Maazị Joseph Kafunda sitere na Namibia, nnukwu onye na -eme ihe nkiri na ọkachamara njem nlegharị anya jiri obiọma kwado profaịlụ m maka nhọpụta ndị ga -achọ ọkwa nke ndị dike njem.
Kwe ka m kwụọ ya ụtụ ma kelee kọmitii ahọpụtara nke ị duziri maka ịmụ akwụkwọ na ịnakwere inye m nnukwu aha dike nke njem.
Nhọpụta a na -abịa naanị otu afọ mgbe kọmitii isi nke njem nlegharị anya nke Afrịka mere m ihe ùgwù nke ibuli onwe m n'ọkwa onye nnọchi anya ndị njem nlegharị anya nke Afrịka.
Nraranye ndị a, anyị agaghị anwa anwa kwuo ya, bụ mkpụrụ nke ahụmịhe afọ 30 na ịrụsi ọrụ ike iji nyere obere onyinye anyị maka mmepe njem nlegharị anya Africa, n'ụwa niile na ọkachasị nke Senegal, obodo m nke nyere m ihe niile.
Enyere m nsọpụrụ n'izu a ka kọmitii Pyne Awards 2021 họpụtara m ka m gosi ndị na -ege ntị mmeri nke ụlọ ọrụ kacha mma n'Africa n'oge ememme gọọmentị n'ihu ndị ozi na ndị nnọchi anya na ndị mba ọzọ.
Aghọtara m mkpa na ibu nke ihe ùgwù a sitere na nnukwu ndị njem nlegharị anya ụwa, ọ ga-amasị m ịkwado nkwado m site na ịgbatị mbọ na ọnụ ọgụgụ na ịdị mma maka ịtụteghachi njem nlegharị anya nke Africa mgbe Covid-19 gasịrị.
Maazị Deme Mouhamed Faouzou
Dike njem nlegharị anya na Dakar, Senegal
Maazị Deme Mouhamed Faouzou enyerela aka ma a bịa n'ihe gbasara njem nlegharị anya na Senegal na karịa.
Ọ bụ onye ndụmọdụ nke Ministry of Tourism and Air Transport na Senegal.
Amara ya na -ekwu okwu n'atụghị egwu ma a bịa n'ihe gbasara njem na etu njem kwesịrị ịdị.
Ọ bụ ọkachamara na njem, ile ọbịa, na ngalaba ụgbọ elu. Ahụmahụ ya ma na ngalaba nkeonwe yana na nchịkwa ọha bụ ihe anyị na -ahụghị n'ọtụtụ ndị isi
Ọ nwere oke mmasị maka njem, mmepe ya ma nwee nnukwu agụụ ịlụ ọgụ maka mba ndị mepere emepe iji nweta ohere itinye ego site na njem,
Ọ bụ onye na -egosipụta ụkpụrụ nkwanye ugwu, ịkekọrịta, ịdị n'otu, na ụkpụrụ nke 'imeghe na akụ na ụba.
Maazị Faouzou bụ onye otu Network Njem Nleta Ụwa.
Ọ gwara eTurboNews:
Maazị Faouou kwuru:
Abụ m onye omee ọkachamara nke gụchara akwụkwọ na njem nlegharị anya, ile ọbịa, na ngalaba ụgbọ elu, nwere ahụmịhe ọtụtụ afọ ma na nkeonwe yana na nchịkwa ọha.
Enwere m mmasị na njem, ahụrụ m mmepe ya n'anya na enwere m agụụ siri ike ịhụ ohere mba ndị mepere emepe nwere ike ịpụta site na njem nlegharị anya, nke gụnyere ụkpụrụ nkwanye ùgwù, ịkekọrịta, ịdị n'otu, na ụkpụrụ nke 'imeghe na imepụta akụ. .
A bụ m onye nkuzi na ọkachamara na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Mahadum maka minista njem na njem ụgbọ elu na Senegal.
A bụ m onye isi ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem, onye njikwa ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ, ọkà okwu, onye na -enye ọzụzụ, onye ndụmọdụ dị elu, na onye isi oche nke National Observatory for Development of Tourism in Senegal.
Abụ m onye otu na onye nnọchite anya Senegal na African Association of Hospitality Professionals (AAHP), onye nnọchite anya Kọmitii njem nlegharị anya nke Afrịka na-asụ French.
A bụ m onye nnọchi anya gọọmentị Ndị njem nlegharị anya nke Africa.
Abụkwa m onye dere akwụkwọ dị iche iche, gụnyere njem njem na njem nlegharị anya ndị Senegal.
Abụ m onye ndoro-ndoro odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation-UNWTO.
Enwetara m 2017 Knight nke National Order of Merit nke Republic of Senegal.
Maazị Faouzou nọ na ụlọ ọrụ. Zute ndị dike njem nlegharị anya 16 ebe a.
Onye isi oche WTN Juergen Steinmetz kwuru:
"Anyị nwere nnukwu nganga ịsọpụrụ Deme Mouhamed ka ọ bụrụ dike mbụ njem nlegharị anya na West Africa. Ọ na -agbasi mbọ ike n'inye mba ya Senegal nkwado na njem na njem nlegharị anya na -agafe nsogbu a ugbu a. Ọ na -ewe ndị mmadụ ọhụụ, ume, na mmetụta iduzi ya. Ekele dịrị m! ”
Africa Onye nnochite anya Aviation Kọmitii Ile ọbịa Investment Namibia Organization Senegal Tourism Transport World Tourism Organisation
Diana McIntyre-Pike ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 24, 2021 na 07:26
Ekele Deme Mohamed maka isonye na WTN International Tourism Heroes Award Family nke m nwere nsọpụrụ itinye na 2020 ma na -atụ anya ijikọ gị n'oge na -adịghị anya